SET စံ | Apg29
SET encryption ကို, ဒစ်ဂျစ်တယ်လက်မှတ်များနှင့်ဒစ်ဂျ
SET ကွန်ပျူတာတပ်ဆင်တချို့ software ကိုလိုအပ်သည်။ ဝယ်သောသူသူတို့ရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးဝယ်ခြင်းတောင်းကိုဖြည့သည့်အခါနှင့် "ခရက်ဒစ်ကတ်များနှင့်အတူလစာ 'ကိုရွေးချယ်ပါအမျိုးမျိုးသောဆက်သွယ်ရေးကြာပါသည်။ လက်မှတ်နောက်ကျောနှင့်စေလွှတ်နေကြတယ်, dual-ဒစ်ဂျစ်တယ်လစာအမိန့် created နှင့်ဘဏ်များ၏ထိန်းချုပ်မှုပေးထားကြသည်ကိုဖန်ဆင်းသည်။ အဲဒီမှာအားလုံးအသုံးပြုသူများအတွက်တစ်ဦးလို့ခေါ်အမြစ်သော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဆော့ဝဲထဲသို့တည်ဆောက်နိုင်အောင်စူပါမားကတ်များတွင်ပေါ်ထွန်းသော encryption ကိုသော့ထဲကအဘို့။
SET အင်တာနက်ပေါ်ရှိအကြွေးကတ်များနဲ့လုံလုံခြုံခြုံပေးဆောင်ဖို့စီမံကိန်းနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစံဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအီလက်ထရောနစ်ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ဥပဒေကြမ်းများ၏ငွေပေးချေမှုနှင့် ပတ်သက်. အဓိကအားဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါစီမံကိန်းသည်နှစ်လယ်ပိုင်းတွင် 90 ခုနှစ်စတင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအတိုကောက်ဆှီဒငျတွင်လုံခြုံအီလက်ထရောနစ်ငွေပေးငွေယူသောအလုံလုံခြုံခြုံအီလက်ထရွန်းနစ်ကိုဆိုလိုတာပါ။ စံရဲ့ဖန်တီးမှုနောက်ကွယ်မှထိုကဲ့သို့သောဗီဇာ, မာစတာကတ်, IBM, Microsoft နှင့် Netscape ကအဖြစ်အကြီးစားကုမ္ပဏီများသည်ရှိကြ၏။ ကဖြစ်လိုက်တဲ့အခါတစ်ဦးရှေ့ပြေးစီမံကိန်းဆွီဒင်ကနေတချို့ကြီးမားသောဘဏ်များနှင့်စာတိုက် Giro ပါဝင်ခဲ့။
SET encryption ကို, ဒစ်ဂျစ်တယ်လက်မှတ်များနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်လက်မှတ်ပေါင်း (ပုံမှန်ကဒ်ဝယ်ယူမှုမှာလက်မှတ်ပေါင်းသက်ဆိုင်ရာ) အပေါ်အခြေခံသည်။ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာမှာ Data ကတ်များဒစ်ဂျစ်တယ်လက်မှတ်၏အသုံးပြုမှုအပါအဝင်ကာ encrypt လုပ်ထားတဲ့ခရက်ဒစ်ကဒ်အရေအတွက်ကပို့ကဒါခေါ်ကို virtual ( "အတု") ကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။ ဒါဟာကဒ်အသုံးပြုသူများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုနှစ်ဦးစလုံးမှဘဏ်များနှင့်ကုမ္ပဏီတခုသည် Verisign သူကိုထိန်းချုပ်မှုများနှင့်ပြဿနာလက်မှတ်များပါပဲ။ သည် Verisign ပြပွဲတစ်ခုကန်ထရိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကုန်သည်ကွဲပြားခြားနားသောလက်မှတ်များခရက်ဒစ်ကဒ်ဝယ်ယူများအတွက်နှုတ်ယူခြင်းအောင်အခါအတိတ်အသုံးပြုတဲ့ငွေပေးချေမှုတံဆိပ်ခေါင်းနှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါတယ်။
ဆိုက်ဘာငွေဟာ SET ဖွံ့ဖြိုးကူညီပေးခဲ့သလည်း SIPS လို့ခေါ်တဲ့ဆင်တူသည့်စနစ်ရှိပါတယ်သိရသည်။ SET နှင့် CyberCash encryption ကို၏တူညီသောအမျိုးအစားကိုအသုံးပြုသည်။ Verifone အဆိုပါ SET စံသုံးပြီးတခြားအိမ်နီးချင်းကုမ္ပဏီများသည်ဖြစ်ပြီး, ဒါကြောင့်စမ်းသပ်ပြီးသောအခါဖြစ်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံပေါင်းငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်တူသောတားဆီးဖို့ကြိုးစားအဖြစ် SET နှင့်အလားတူစနစ်များနှင့်အတူ, သငျသညျ, တစ်ဦးချင်းစီအကြားငွေလွှဲလို့မရပါဘူး။ ဤမျှလောက်တခြား cashless နှင့်ဝသကဲ့သို့ပြီးတော့မြင့်မားသောကြောင့်စီမံခန့်ခွဲမှုကုန်ကျစရိတ်များမသေးငယ်တဲ့ငွေပေးချေမှုဖို့ SET ကိုအသုံးပြုပါ။
ကွန်ပျူတာနှင့်ကွန်ပျူတာကုမ္ပဏီများမှ - ဘဏ္ဍာရေးကျောရိုး၏အီလက်ထရောနစ်ကမ္ဘာကြီး
ဘဏ်များတဖြည်းဖြည်း၎င်းတို့၏စစ်ဆင်ရေးအတွက်ကွန်ပျူတာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာကိုသုံးစွဲဖို့စတင်အဖြစ်ဒါဟာ '' 50s ၌ရှိ၏။ တချို့ကတစ်ဦးရဲ့အထောက်အထားနှင့်ဆက်စပ်လိမ့်မယ်လို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတလွှားပျံ့နှံ့ရှိပါတယ်တဲ့ cashless system ပေါ်တွင်ပင်ထိုအချိန်ကစဉ်းစားမိတယ်။ သူတို့ဟာ EFTS ရဲ့ဖြစ်နိုင်ချေအနာဂတ်စနစ် (အီလက်ထရောနစ်ရန်ပုံငွေများ System ကိုလွှဲပြောင်း) ကိုခေါ်။ , ဒါပေမယ့်စနစ်တကျစတင်ခဲ့ကွန်ပျူတာများနှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအဖြစ် '' 60 ကာလအတွင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာအစောပိုင်းအဆင့်တွင် Computerized များအတွက်ဘဏ်အလယ်တန်းမန်နေဂျာအပြင်းထန်ဆုံး vurmade ဖြစ်ခဲ့သည်။ တဦးတည်းအနေနဲ့တစ်ခုလုံးကိုနျဌာနခှဲဖန်ဆင်းတော်မူသော Citibank မှာယောဟန်ကရိဒ် (အဲဒီမှာဘုတ်အဖွဲ့၏နောက်ပိုင်းတွင်ဥက္ကဌ) automated ဖြစ်လာခဲ့သည်ဖြစ်ခဲ့သည်။
အလယ်တန်းမန်နေဂျာကြားတွင်ဤသည် Computerized စိတ်အားထက်သန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌မသာရှိကြ၏။ တောင်မှစပိန်အတွက် COAS (စစ်ဆင်ရေးနှင့် Automation ၏ကော်မရှင်) လို့ခေါ်တဲ့တစ်ခုခုသို့သူတို့ကိုငါအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ID ကိုကဒ်တစ်မျိုးကိုဆက်စပ်လက်ငင်းငွေပေးချေ၏အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွက်အလွန်အစောဆုံးစမ်းသပ်မှုတစ်ခုမှာဝီလ်မင်တန်အတွက် 1967 ခုနှစ်တွင်ခဲ့ဝဲဘဏ်တို့ကဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာ IBM ကမူလတီထွင်သည့်စကားအဖြစ်ဖော်ပြထားသည် magnetremsetekniken ခဲ့ပါတယ် "ဘဏ်လုပ်ငန်းလောကီသားတို့သည်အဖို့အိုင်တီကမ္ဘာမှလက်ဆောင်တစ်ခု။ "
အဆိုပါငွေစုဘဏ်များ၏ Computerized အဘို့အဦးဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး Sven, G Svensson အစောပိုင်းထောက်ခံသူ၏ဆွီဒင်ချွေတာသုံးစွဲမြှင့်တင်ရေးအတွက်။ စောစော 50 ရာစုသကဲ့သို့ Computerized ဘဏ်လုပ်ငန်းမှာနှင့်ဆက်စပ်သောSaltsjöbadenအတွက်နှစ်ပတ်လည်ညီလာခံကျင်းပခဲ့သည်။ အင်တာနက်ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကမ္ဘာကြီးထဲသို့ဝင်သောအခါအ 90 ဆယ်စုနှစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီများမကြာခဏသည်အခြားလှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူစတင်ခဲ့ပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာအဓိကကွန်ပျူတာကုမ္ပဏီဖြစ်လာသည်။ ဤရွေ့ကားမကြာခဏကြီးမားကော်ပိုရိတ်ကုမ္ပဏီကြီးများသို့ပေါင်းစည်းပြီးတော့ဖြစ်ကြသည်။
Burroughs ဘဏ်လုပ်ငန်းကမ္ဘာကြီးအပေါ်အလေးပေးအတူထိုကဲ့သို့သောကြီးမားကွန်ပျူတာကုမ္ပဏီဖြစ်ခဲ့သည်။ Burroughs SWIFT အပါအဝင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ဤသည်ဘဏ်များအကြားဆက်သွယ်ရေးတစ်ခုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစနစ်ဖြစ်သည်။ တစ်ဦးကယခင်ကြီးမားသောလွတ်လပ်သောကုမ္ပဏီများမှ Sperry ခဲ့ကြသည်။ Burroughs ဒါရိုက်တာမိုက်ကယ် Blumenthal, Unisys မှ Burroughs နှင့် Sperry ပေါင်းစည်းဖို့ 1986 ခုနှစ်မှာအောင်မြင်ခဲ့သည်။ Blumenthal လည်းယခင်ကဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးခဲ့သညျ။
ဤအခြေအနေတွင်, Remington Rand အတွက်နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့သမိုင်းဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများသည်။ Unisys စီးပွားရေး, SWIFT ပေါ်တွင်အလုပ်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်နှင့်စစ်တပ်၏ကိုယ်စားဘို့ RFID-tagged ကွန်တိန်နာ၏ကြီးမားသောစနစ်၏ဂရုစိုက်ရန်အတွက်အချင်းချင်း Alia ပါဝင်သည်သိရသည်။ RFID ရေဒီယိုလှိုင်းတံပိုးကို အသုံးပြု. အချက်အလက်များ၏သေးငယ်တဲ့ပမာဏထုတ်လွှတ်တဲ့နည်းပညာဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကစာအုပ်၏ကျန်အသုံးပြုပုံမြင်ရကြလတံ့အတိုင်း cashless လူ့အဖွဲ့အစည်းမှ RFID အများအပြားဆက်သွယ်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ Microsoft ရဲ့ operating system ATM စက်များတွင်အသုံးပြုသည်ပြီးသားဖော်ပြခဲ့တဲ့ပါပြီ။ အဆိုပါ Linux ကို operating system လည်း, ဤအတွက်စူပါအင်တာနက်ဆာဗာနှင့်ပိုကြီးတဲ့ကွန်ပျူတာစနစ်များ၏အများစုအသုံးပြုသောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
မျိုးစုံဘဏ်များမှာအကြွေးဝယ်ကဒ်ထုတ်ပေးရေးဖွငျ့အခွားသောအမှုအရာ syssIar ကြားတွင်ဖင်လန်နှင့်ဆွီဒင်နိုင်ငံတက်ကြွအိုင်တီကုမ္ပဏီ Tieto အတွက်နောက်ထပ်ကုမ္ပဏီဥပမာ။ Facebook ကိုအလေးအနက်ထားငွေပေးချေမှုလုပ်ငန်းသို့သွားပြီ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ 2011 ခုနှစ်တွင်တစ်ဦးကို virtual (သိသာသို့မဟုတ်ပင်အတု) ငွေကြေးကိုစတင်နှင့်ကွန်ပျူတာဂိမ်းကုမ္ပဏီများသည်
အပေါ်ချက်ချင်းဆွဲထားကြ၏။ ထို့အပြင် 500 သန်းအသုံးပြုသူများစီစဉ်ထား Facebook ကို chatappen Messenger ကိုမှတဆင့်ခရက်ဒစ်ကဒ်အားဖြင့်ပေးဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သင်တို့ကိုတစ်ဦးချက်တင်ဆော့ဖ်ဝဲကိုနည်းလမ်းများအသုံးပြုခြင်း "စာသားကိုမှဆွေးနွေးချက်။ " ဒါဟာ e-mail နဲ့ပုံမှန်မေးလ်နှင့်မတူဘဲ, (တယ်လီဖုန်းဆွေးနွေးချက်ကိုကြည့်ပါ) တဖြည်းဖြည်းသူတို့ကိုအကြားစာကြောင်းများပေးပို့သည်။
Facebook ကိုလည်းအချို့ကိစ္စများတွင်တစ်ဦးယှဉ်ပြိုင်မှုအတွက်စွပ်စွဲအမြတ်အစွန်းအားဖြင့် kronor ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူတွေကိုလုယက်ရာမှတဆင့်ထိုကဲ့သို့ခြမ်း -like တစ်ခုအီကာကိုအဖြစ် fraudsters များအတွက်ကိရိယာတခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤဘဏ်သေတ္တာများအပေါ်ဒေတာစုဆောင်းပြုနိုင်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီ Apple ကကတ်များရှိသည်သောဖောက်သည်များအတွက်အကြွေးဝယ်ကဒ်အချက်အလက်များ၏ကြီးမားတဲ့ဒေတာဘေ့စညျဆောကျခဲ့သညျ။ အဆိုပါကွန်ပျူတာကုမ္ပဏီများကတရင်းတနှီးသူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်ကြောင့် cashless လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါသည်ချင်တယ်။ ပိုပိုမိုကွန်ပျူတာများ cashless ။
ဖြစ်ကောင်းကြောင့်ဘာသာစကား၏မှန်းဆစာဖတ်သူကိုအမျှဤစာအုပ်ကိုရေးသားခဲ့သည်သောသူမရှိ 20 နှစ်အရွယ်ရှိပါတယ်။ အတော်လေးနှစ်အနည်းငယ်ဘို့တလမ်းတည်းဖြင့်သို့မဟုတ်အခြားအတွက်ကွန်ပျူတာများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့သိရသည်။ ဘယ်လိုဟောင်းကျွန်မနံနက်ငါအလိုမရှိ, သို့သော်, ဖော်ပြထားခြင်းကြောင့်အသီးသန့်တည်ရှိမှုအကြောင်းပြချက်၏။ တစ်ဦးကအလိုအလျောက်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ iaktagelse ။ ငါကွန်ပျူတာစက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့ဘေးထွက်ထံမှ cashless လူ့အဖွဲ့အစည်းဆီသို့ဦးတည်နေတဲ့တစ်ခုတည်းသောအနှုတ်လက္ခဏာတုံ့ပြန်မှုကိုဖြတ်ပြီးလာချင်ပါတယ်မတိုင်မီဒါဟာတစ်သက်တာ ယူ. , ထက်ဝက်နီးပါးဤစာစောင်၏အရေးအသားလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် 50 နီးပါးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းဖြစ်ပျက်သောအရာတစ်ခုခုအကြောင်းပါ။ ယနေ့ကွန်ပျူတာကမ္ဘာကြီးဟာသူတို့ရဲ့အာရုံကိုယူနှင့်မည်သို့အနုတ်လက္ခဏာဟာ cashless လူ့အဖွဲ့အစည်းမြင်ကြပြီမှမထင်ထားဘူး။
အဆိုပါချွင်းချက်တစ် RAND Corporation မှရှင်ပေါလု Armer အမည်ရှိသောသူ, ပြီးသား cashless ငွေပေးချေမှုန်းကျင်နှောင်းပိုင်း 60 ရဲ့က high-profile ကို privacy ကိုကိစ္စများအတွက်အကြောင်းပါ။ သူကအမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်မှာဒီ၏မိန့်မြွက်တော်မူ၏။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကွန်ပျူတာကမ္ဘာကြီးတွင်ပိုမိုထိုကဲ့သို့သောယောက်ျားမိန်းမတို့လိုအပ်လိမ့်မယ်။ သင်တန်းအရေးပါဟောင်းတဦးကဘဏ်လူများရှိပါသည်။ ဒါပေမယ့်ဘယ်မှာကွန်ပျူတာကမ္ဘာကြီးအနေဖြင့်ဝေဖန်မှုများပါသလဲ Armer အချို့သောအတိုင်းအတာအထိတစ်ဦးချင်းစီကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်ပါဘူးသောမှတ်တမ်းများကနေနာမကိုအမှီဖယ်ရှားပစ်ရန်ပင်မပေးပြောဆိုထားသည်။
သူ့အလုပ်မှာတော့အချိန်မှာကွန်ပျူတာစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်လုပ်ခအပေါ်ဒေတာ Armer လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာသူကပထမဦးဆုံးအမည်မသိလမ်းထင်သောအရာကိုအတွက် data တွေကိုသိမ်းထားဖို့လာကြတယ်ကတ်များအပေါ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်မဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါဒေတာကိုသုံးဒေသများသို့တစ်ခုတည်းကိုသာလစာ, ပညာရေးနှင့်တစ်ဦးစုစုပေါင်းပထဝီအုပ်စုခွဲပါဝင်သည်။ ရှင်ပေါလု Armer ထို့နောက်နိုင်ရန်အတွက်ပစ္စည်းများခွဲထားခဲ့သည်သောအခါသူချက်ချင်း (အစမှမရည်ရွယ်ခဲ့သော) ကအမြင့်ဆုံးလစာသူတွေအကြောင်းသူမြင်နေရတယ်။ ပတ်သတ်ပြီးငွေပေးချေမှု cashless ဒီအရာကလိုငွေပြမှု၏အနာဂတ်သမာဓိရှိသာရှိပြီးပြည်ပမှ privacy ကို၏ဆှေးနှေးခရန်သူ၏ကတိကရဲ့ start ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်kontantlöshetနှင့်ကွန်ပျူတာများအကြားအရေးကြီးဆုံး connection ကိုကြိုတင်ငွေဖြည့်ကတ်များမှာသိမ်းထားတဲ့ကြောင်း မှလွဲ. သူတို့က e-ပိုက်ဆံ cashless ဒါခေါ်ကြသည်ကြောင်းကိုလည်းဒါခေါ်ကွန်ယက်ကိုပိုက်ဆံ၏ပုံစံအတွက်ကွန်ပျူတာဆာဗာထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျကိုဘယ်လိုမလုံခြုံကွန်ပျူတာများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါလျှင်, ဒါကြောင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြောင့်အစားဟမ်းစတားလှောင်အိမ်၏စောင်ရေရပ်တန့်ဖို့ဘေးကင်းပါလိမ့်မယ်။
သာကွန်ပျူတာများအတွက်အချို့စိတ်ဝင်စားမှုရှိသောသူတို့အဘို့ငါကွန်ပျူတာကိုဝယ်ခြင်းငှါမအကြံပြုပါသည်။ ဒါကြောင့်တခါတရံတွင်ရှိသည်ဖို့ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကွန်ပျူတာမဝယ်ပါနဲ့။ သငျသညျမပါဘဲအသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာနီးပါးရုံကားဂိုဒေါင်ထဲမှာရပ်နေသောကားတစ်စီးကိုဝယ်ယူရန်ဖို့မကဲ့သို့တူညီသောနိယာမဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ဆန္ဒရှိအဖြစ်သူတို့အများကြီးကွန်ပျူတာများအဖြစ်ရောင်းချမည်မဟုတ်ဒါကြောင့်ကွန်ပျူတာကုမ္ပဏီများအကြှနျုပျတို့အပျေါ foist မှkontantlöshetကြိုးစားနေနှင့်အတူ ပို. ပို. အပြင်းအထန်တောင်းဆိုနဲ့ Big Brother ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာအစကွန်ပျူတာတစ်လုံးနှင့်အတူလုပ်ဖို့အလွန်အသုံးဝင်နှင့်ပျော်စရာအရာဖြစ်၏။ ငါနေဆဲကွန်ပျူတာများမှပေါ်ကိုင်အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးကြီးတွေအကြောင်းပြချက်ကဤစာအုပ်ရေးသားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာစာကြည့်တိုက်, လက်နှိပ်စက်နှင့်သန့်ရှင်းသောကစားစရာအဖြစ်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော်လည်းငါသည်ရိုးသားဖြစ်လိမ့်မယ်, ကွန်ပျူတာများ၌ငါ၏အကျိုးစီးပွားအနည်းငယ်ငါသည်ဤမည်သောကျမ်းစာ၌ရေးထားသောပါပြီတစ်ဦးချင်းစီနှင့်အခါတိုင်းအနိစ္စရောက်လေ၏။ အရာတစ်ခုမှာအချို့ဖြစ်ပါတယ်။ စုစုပေါင်း cashless လူ့အဖွဲ့အစည်းကြှနျုပျတို့အပျေါလြှငျ, အကြံပြုဖို့တစ်ဦးတည်းသာအရာရှိတယ်။ စုစုပေါင်းနှင့်အထွေထွေနည်းပညာသပိတ်မှောက်။ မလုပ်ဖို့hushållsabetetဖို့ရှိတယ်လို့အရာများ၏ကြင်နာသော်လည်းဆက်သွယ်ရေးနှင့်သတင်းအချက်အလက် function ကိုရှိတယ်လို့အခြားအရာအားလုံး။ ဒါဟာတကယ်နည်းပညာခစျြတဲ့သူတစ်ဦးစာရေးဆရာတစ်ဦးထံမှရိုးသားအကြံဉာဏ်ကိုဖြစ်ပါတယ်။ သီအိုရီတစ်ခုလုံလုံလောက်လောက်ကြီးမားတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနည်းပညာသပိတ်မှောက်, kill kontantlösheten။ ဒါဟာနည်းပညာကိုမပါဘဲမတည်ရှိနိုင်ပါ။ ငွေသား (ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ပတ်သက်. မှလွဲ. ) လျှပ်စစ်မီးနှင့်နည်းပညာမရှိဘဲစီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါ။ သူတို့ကတော်တော်များများရာစုနှစ်ဒီတော့ပွုပါပွီ။
ငါကငါရိုးရှင်းစွာကွန်ပျူတာများကိုအတူတက်အဆုံးသတ်သောစိတ်ကူးတွေအကြောင်း fantasized ကြောင်းအကြိမ်ပေါင်းများစွာမဆိုလိုပါဒီတော့ကွန်ပျူတာသုံးစွဲဖို့ဆက်လက်ချင်ပေမယ့်။ ဖြစ်နှင့်မရှိဘဲလုပျဆောငျမညျဘယျအရာဘဝအံ့ဩကြ၏။ ရပ်ရွာမော်နီတာနှင့်ထိန်းချုပ်မှုနိုင်ငံသားများပိုပိုပြီးကွန်ပျူတာများဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါဒုက္ခမှမကုန်မဆုံးဖြစ်ရှိပုံရသည်။ ဒါကြောင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်, သင်အနည်းငယ်ပိုပြီးတင်းကျပ်ရနိုင်ပြီး, အဖြစ်အစဉ်အမြဲသင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုစဉ်းစား။
အဆိုပါ cashless လူ့အဖွဲ့အစည်းအပြည့်အဝက၎င်း၏ရုပ်ဆိုးမကျြနှာကိုပြသပါလိမ့်မယ်တဲ့အခါ, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါသည်ငါ့အကျိုးစီးပွားတစ်ဦးအဖြစ်ကွန်ပျူတာများရှိသည်ဖို့ရာအရပျထဲမှာလုံးဝအလေးအနက်အစီအစဉ်အတွက်ဘောလုံးကစားခဲ့ဆန္ဒရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒီတစ်ခါလည်းတစ်သံပိုက်နှင့်အတူအစောပိုင်းအိမ်မှာကွန်ပျူတာနှင့် PC များကျိုးပဲ့ပျက်စီးခဲ့ကွောငျးအရပျ၌စစ်သွေးကြွတက်ကြွလှုပ်ရှားသူအချို့ကြင်နာခဲ့ကြသင့်ပါတယ်။ ဖတျရှုစာတန်းများချိတ်ဆွဲထားသည်အဆိုပါ Mainframe အတွက်ကွန်ပျူတာစင်တာများအပြင်ဘက်တွင်ရပ်နေကြ၏ "ဟုအဆိုပါကွန်ပျူတာကိုမရဏ!" ။ ထိုအခါမူကားအခြားတစ်ဖက်တွင်, ဖြစ်ကောင်းမဟုတ်ဤစာအုပ်ဖြစ်သို့ရောက်ကြ၏။
တစ်ဦးနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်သကဲ့သို့ငါ့ကိုမြင်သောသူတို့အားရှိကောင်းရှိနိုင်ပါသည်။ သောသူအပေါင်းတို့သည်မှာအမှုမဟုတ်ပါဘူး။ အဘယ်သို့ငါအရှိဆုံးနဲ့တူသွားလာရင်းနှင့်အတူလူသရွှံ့ cashless မြောင်း skip လိမ့်မယ်လိမ့်မယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, တဦးတည်းပထမဦးဆုံးအနောက်သို့အနည်းငယ်ခြေလှမ်းများယူရမည်ဖြစ်သည်။ နည်းပညာအပြည့်အဝနောက်တဖန်အပြုသဘောဆောင်တဲ့အရာများအတွက်အသုံးပြုသွားမည်နိုင်ပါသည်ကတည်းက။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကအလွယ်တကူကွန်ပျူတာများ၏တီထွင်မှုမပါဘဲ cashless လူ့အဖွဲ့အစည်းက၎င်း၏လျော်သောခေတ်သစ် form မှာဖွစျပါတယျမဟုတ်ကြောင်းကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လိုလက်ထောက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Lars Nyberg 2008 ခုနှစ် Balsta အတွက်ဘဏ္ဍာရေးကဏ္ဍပြည်ထောင်စုကွန်ဂရက်အပေါ်တစ်ဦးဟောပြောပွဲမှာစာသားကဆိုသည်။
"ဒါဟာငွေပေးချေမှုကိုအဘယ်သူသည်ကြင်နာစွာလစာကုန်သွယ်ရေးနှင့်ဘဏ်များရှိကွောငျးယုံကြည်ဖို့ပထမဦးဆုံးအတွေးမှာလွယ်ကူပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ရိုးရှင်းတဲ့။ ကုန်သည်များမဟုတ်ရင်သူတို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လို့မရပါဘူး, သူတို့ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ဖုံးလွှမ်းရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ထိုဘဏ်များအဘို့အတတ်ကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး။ ထိုကြောင့်, မဟုတ်ရင်အမှုဖြစ်လိမ့်မည်ထက်နို့နှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဘဏ်ထဲမှာနည်းနည်းနိမ့်စတိုးများနှင့်သိုက်နှုန်းထားများအတွက်တစ်နည်းနည်းပိုပြီးစျေးကြီးနေပေမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဝယ်ဖို့ကုန်ပစ္စည်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအပေါ်နောက်ဆုံးမှာတက်အမှတ်အသားအားလုံးကိုငွေပေးချေ၏ကုန်ကျစရိတ်အလျှိုလျှိုပေါ်ပေါက်။ ဒါကြောင့်အတွင်းစားသုံးသူများနှင့်ဘဏ်ဖောက်သည်များဖြစ်ပါသည် နောက်ဆုံးမှာအားလုံးငွေပေးချေ၏ကုန်ကျစရိတ်ပေးဆောင်ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုမမြင်ရပါဘူးဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကိုသူတို့ဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ဖို့ဦးဆောင်ကြသည် - ။ ။ ဒါမှမဟုတ်တခြားကြောင့်တစ်စုံတစ်ဦးကိုပေးဆောင်ဖြစ်ပါတယ် "။
ဒါဟာထို့ကြောင့်အဝတ်အချည်းစည်းအမှန်တရား, တစ်ချိန်ကများအတွက် Riksbank အတွင်းပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကပြောသည်။ ငွေပေးချေမှုပေးဆောင်သူကို client နှင့်စားသုံးသူရှိပါတယ်။ ကိုယခုကုန်သွယ်ရေးနှင့်ဘဏ်များမှတရားစွဲဆိုမည်မျှငွေသားပေးချေမှုများကိုအကြောင်းကိုချင်နေကြတဲ့ကိုရှောင်ရှားကြပါစို့။ အဆိုပါဘဏ်များအရာစကားမစပ်, ပျမ်းမျှဆွီဒင်တစ်နှစ်လျှင်စင်ကြယ်သောအမြတ်အစွန်းအတွက်ရာပေါင်းများစွာသောဒေါ်လာဝင်ငွေ။ ကဘဏ်မှာမိမိတို့၏နေ့စဉ်ယူငွေသွင်းမရနိုငျသောအခါသို့သော်သင်သည် "ဆင်းရဲသားကိုကုန်သွယ်မှု" အကြောင်းပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။ အမျိုးသားဘဏ်ကလူမှားယှငျးစှာပိုပြီး "စီးပွားရေးအရအကောင်းဆုံး" ဟုဆိုကာအဖြစ်လုပ်ဖို့ပိုခရက်ဒစ်ကတ်များသုံးစွဲဖို့လိုသည်။ Nyberg လိုချင်လည်းဤအမှုကိုနားလည်ပေမယ့်အမှန်တရားပြောပြခြင်းဖြင့်လုံးဝပျောက်ကိုပြု၏။
Stefan Ingves လက်ထောက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲ့ကြေညာချက်အခါနှစ်လယ်ပိုင်း 90 ရဲ့တစ်ဦးဟောပြောပွဲမှာ, သူအောက်ပါအတိုင်း။
"ကျယ်ပြန့်အဓိပ္ပာယ်မှာ, နောက်ထပ်လျှော့ချနိုင်ပါတယ်ပိုပြီးအရောင်းအဖြင့်ယနေ့စျေးကြီးစက္ကူ-based အပြောင်းအလဲနဲ့ကတည်းကအီလက်ထရောနစ်ကောက်ယူဖြစ်ကြောင်းနှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်၏။ "
Ingves ပထမဦးဆုံးထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အရှင်လုံးဝမှားယွင်းသောဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာနောက်ဆုံးမှာငွေပေးချေ၏ကုန်ကျစရိတ်ယူစားသုံးသူများနှင့်မဘဏ်နှင့်ကုန်သွယ်မှုသည်။ ဒုတိယကြေညာချက် Riksbank ရဲ့ဒါခေါ် "ကြားနေရေး" ဆန့်ကျင်။ ဒါကြောင့်လူအစုအဝေးထိန်းချုပ်ငွေသားများအတွက်လူဦးရေရဲ့ဝယ်လိုအားသည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ Riksbank ပွင့်လင်းkontantlöshetenဟုပြောသည်။
ဒါဟာအဖြစ်သေးကိုယ်တိုင်ကငွေသားသို့မဟုတ်ခရက်ဒစ်ကတ်များသုံးစွဲဖို့ဆုံးဖြတ်နိုင်သောမှန်သည်။ လူတွေအဆက်မပြတ်ကြောင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောရှိပါတယ်အဖြစ် cashless option ကိုဦးစားပေးလုပ်ဖို့ဘဏ်တွေ, မီဒီယာ, အစိုးရအေဂျင်စီများနှင့်အခြားသူများအားဖြင့် brainwashed သောအခါမူကား, ထိုဆုံးဖြတ်ချက်၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းကိုဖယ်ရှားခဲ့သည်။ ကံမကောင်းစွာပဲလူများစွာရုံချင်နေကြတဲ့ရှောင်ရှားသို့မဟုတ်အခါသင်မှားယွင်းသောအားသာချက်များအထွက်နှုန်းများကလှည့်ဖြားကြသည်ရန်။ ကျွန်တော်တို့အများသောသူတို့ကအစားခုခံဖို့နှိုးဆွဖြစ်ပါတယ်။ အကြွေးဝယ်ကတ်များ၏ကုန်ကျစရိတ်ဘဏ်နှင့်ခရက်ဒစ်ကဒ်ကုမ္ပဏီများအလွန်ကြီးမားအရေအတွက်လျှို့ဝှက်ထားသည်။ ထို့အပြင်သာဘဏ်နှင့်ခရက်ဒစ်ကဒ်ကုမ္ပဏီများသည်အမှန်တကယ်kontantlösbrottမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုတခုတခုအပေါ်မှာမျက်စိရှိသည်။
ငွေကိုင်တွယ်စက်မှုလုပ်ငန်း၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းမကြာခဏပြသပေမယ့်စီမံခန့်ခွဲမှု "သည်အလွန်စျေးကြီးတဲ့" ကြောင်းသေး "သိ" ဖို့မကွန်ကရစ်ကိန်းဂဏန်းများရှိပါတယ်။ ကွဲပြားခြားနားသောအဖွဲ့အစည်းများနှင့်လူဦး "ငွေသားကိုင်တွယ်ခြင်းကြီးမားခု၏ကုန်ကျသည်။ " ထိုပြင်းစွာတိုင်ကြား ရုံအမှန်တကယ်ငွေပေးချေ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကဲ့သို့, ငါတို့သည်နောက်ဆုံးမှာလည်းငွေစီမံခန့်ခွဲမှုပေးဆောင်သူစားသုံးသူများဖြစ်ပါတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင် Loomis, ငွေသားကိုင်တွယ်ခြင်းအတွက်ဥပမာအားဖြင့်, လစာ, မိမိပိုက်ဆံအိတ်ထဲကမဟုတ်ပိုက်ဆံကြာပါသည်။ အစပိုင်းမှာဘဏ်များကုန်သွယ်မှုအတွက်ငွေပေးချေမှုများအတွက်အခကြေးငွေအများစုလုပ်ပေမယ့်အဆုံး၌ချေသူကိုစားသုံးသူဖြစ်ပါတယ်။ ယခုငါတို့နောက်ဆုံးမှာငွေပေးချေမှုနှင့်ငွေသားစီမံခန့်ခွဲမှုနှစ်ဦးစလုံးပေးဆောင်သူကိုထူထောင်ခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့်တည်ထောင်ခြင်း whining ရပ်တန့်ဖို့အချိန်ဖြစ်ပါသည်။
များစွာသောအခြားအခင်းအကျင်းအတွက်ငွေပေးချေမှုလုပ်ငန်းပိုက်ဆံကုန်ကျမည်သာတိကျမ်းစာ၌လာသည်။ ဒါဟာအမှန်တကယ်လူမှုရေးကုန်ကျစရိတ်, စီးပွားရေးကုန်ကျစရိတ်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီရဲ့စရိတ်များအကြားခွဲခြားမထားဘူး။ ဒါဟာဝါဒဖြန့်နှာအရာပေါ် မူတည်. သုံးမျိုးကွဲပြားခြားနားသောကုန်ကျစရိတ်များမဆိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟောပြောချက်ကိုမတရားဖြစ်ပါတယ်။ အမြဲလျှောက်ထားသင့်ကြောင်းအဆိုပါအရာနောက်ဆုံးတွင်ချေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်စားသုံးသူ။